Wareysigeygii Jaalle Siyaad W/Q Yusuf Garaad
Wareysigeygii Jaalle Siyaad W/Q Yusuf Garaad - XOG MUHIIM AH | WARAR SUGAN |
| Wednesday, Nov 16, 2016 |
1986, Xilli la dhaafay 10:30 habeennimo ayuu Yaasiin Xaaji Ismaaciil Jirde oo ah weriye khabiir ah, laakiin hadda Madax ka ah Wasaaradda Warfaafintu uu iigu yimid Xafiiska Wararka ee Radio Muqdisho. Waxaan akhrisanayaa wararka caalamka si aan uga xusho kuwa ay tahay in aan ummadda u sheego. Wuxuu i weydiiyay waxa aan caawa ka shaqeynayo. Waxaan u sheegay warka Saqda Dhexe in aan leeyahay iyo kan aroorta 06:30 diyaarintooda iyo akhrintoodaba.
Markii aan hadalka billaabay ayaa waxaa xowli waalli ah nagu dhaafay gaari Cabdi Bile ah oo dhanka airporka u xawaareynaya oo ay kor tuban yihiin Booliiska Dableyda ama ciidanka koofiyad casta ee u khaaska ah Madaxweynaha. Waxay joojiyaha si xoog ah ugu qabteen bartanka waddada meel horteenna ku beegan oo qiyaastii boqol tallaabo in ka badan noo jirta. Inyar markii uu sii jiitamay asaga oo ay shaagaggiisu shanqar aan dhegaha u rooneyn sii deynayaan ayuu istaagay gaarigii. Markiiba dib ayay u soo qaadeen si haddana xawli ah oo riinkiisa aad yaabto.
Halkaas ayay mar qura wada dhaqaaqeen baabuur tiro badan oo u badan Landcruiser guux weyn oo ka badbadis ah iyo xowli ku dhaqaaqaya oo Madaxweynaha lagu gelbinayo. Waxaa dhex yaacaya koofiyad cas nin waliba qorigiisa hal gacan kor ugu hayo oo gaarigii uu la socday beegsanaya. Airporka oo aan ahayn hal waddo ee ah barxad weyn oo wada laami ah ayaa baabuurta midba meel ka soo dhaqaaqay ama ka sii dhaqaaqay. Nalalkooda ifitiinka aragga fog loogu tala galay ayaa u wada shidan oo indhaha aadan siin karin haddii kale wakhti dhan oo ka dambeeya aadan waxba u jeedi karin. Waxaa birbiriqaya qoryaha iyo astaamaha birta ka sameysan ee ku tolan lebbiska ciidanka marka ay qabtaan nalalka baabuurtu.
Ma hubo, waxaanse u maleynayaa baabuur Land Cruiser ah oo Cawke oo Madaxweynaha la socday lagu soo doonay in aan raacay. Kolleyba Cawke ayaan raacay sababta oo ah wadayaasha gawaarida kale ninka keliya ee aan is naqaan wuxuu ahaa wadaha gaariga Madaxweynaha. Isagana suurta gal ma ahayn in aan weydiisto in uu i sii qaado.
Cawke wuxuu ahaa weriyaha khaaska ah ee Madaxweynaha. Wuxuu xilkaas kala wareegay Yaasiin Xaaji Ismaaciil Jirde markii uu noqday Wasiir ku Xigeen ka dibna Wasiirka Warfaafinta. Yaasiin wuxuu mar ka sii horreysay kala wareegay xilkaas, Cabdi Xaaji Gobdoon oo isagu noqday Agaasimaha Guud ee Warfaafinta, ka dibna Sportiga.
Saddexdooda keliya ayaan xusuustaa in ay noqdeen weriyaha khaaska ah ee Madaxweynaha. Waxaa wehliya Axmed Cabdi Nuur oo mar Cawke uu shil galay isagu qabtay xilkaas. Maxamed Khaliif Giir ayaa isaguna ahaa weriyaha Madaxweynaha ee Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed, SONNA oo la shaqeeyay laba Axmed. Xasan Cusmaan (Xasan-Biid) wuxuu ahaa weriyaha Kamerada TV-ga ee Madaxweynaha. Waxaa isaguna jiray sawirqaadaha Madaxweynaha oo ka socday Wakaaladda Filimmada.
Markii aan dhammeystay duubista ee aan u mahadceliyay, inta aanan qalabkeyga xirxiran ayay xaaladdu is beddeshay. Mid ka mid ah Madaxda ayaa aammusnaanta jebiyay oo ila hadlay iyada oo la wada maqlayo. Wuxuu yiri jawaabtaa uu Jaalle Madaxweynuhu ku siiyay ee uu kuu sheegay in magaalada uu hadda ka yimid ee Faransiiska uu Talyaanigu lahaan jiray laakiin uu Faransiisku ka qabsaday war baa ka imaan kara ee ka taxaddar.
AKHRISO:- muxuu salka ku hayaa dagaalka ka socdo Cabud-waaaq
TUUGO LAYAAB LEH OO KA DILAACADAY BOSASO !!!
Ina Hagardiid Cabaaye
Aad & aad